ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် တိုက်ရိုက်ထောက်ခံချက်ရယူနိုင်သော ဆက်သွယ်ရးစက်ပစ္စည်းစာရင်း
(က) Private Automatic Branch Exchanges (PABX. EPABX)
( ခ ) တယ်လီဖုန်းအမျိုးမျိုး (Personal use အတွက် ၂ လုံးအထိ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလို)
( ဂ ) Cordless Telephone (ဂြိုလ်တုဖုန်းမပါ)
(ဃ) Postal Equipments (Frankling Machine, Stamping Machine, Cancelling Machine--- etc.)
( င ) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး စက်ပစ္စည်းများ
မူဝါဒဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက် ရယူပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရသည့် အမယ်များ
(က) မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့)စိတ်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကို
ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ပြောင်းလဲစေသော
ဓါတုဗေဒပစ္စည်း (၂၆)မိုျး ဆေးဝါးများအန္တရာယ် ဗဟိုအဖွဲ့(မူးယစ်ဗဟို)
( ခ ) နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊
( ဂ ) တဲလက်စ်၊ဖက်စ်၊တယ်လီဖုန်းများ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီး
( ဃ ) ပုဇွန်သားပေါက်နှင့် ပုဇွန်အားဆေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊
ငါးအစာများ၊ Alive Fish၊ ငါးဖမ်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
( င ) တိရိစ္ဆာန်ဆေး၊တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းငန်းဝန်ကြီးဌာန၊
(Transit Trade စနစ်အပါအဝင်)
( စ ) ပိုးသတ်ဆေး လယ်ယာစိုက်ပိုျးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့
( ဆ ) မျိုးစေ့၊ ဓါတ်မြဩဇာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
( ဇ ) ဆေးဝါးများ/ ဆေးပစ္စည်းများ/ဆံပင်များ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန
( ဈ ) စားသောက်ကုန်ပစည်းများ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)
( ည ) ရေယာဉ် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဆက်သွယ်ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမှ ဆက်သွယ် ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးသော ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများစာရင်း
စဉ် အမိုျးအစား အမိုျးအစား
၁။ တဲလက်စ် 1.Telex
၂။ ကြိုးမဲ့တယ်လီဖုန်း/ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဖုန်း 2.Cordless Telephone, Satellite Phone
၃။ ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3.Satellite Receiver & Accessories
၄။ ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 4.Transceiver/ Receiver/Transmitter & Accessories
၅။ လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်များ 5.Walkie Talkies/ Handheld Radios
၆။ ရေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ 6. Navigational Communication Equipments
(a) GPS Plotter
(c) MarineRadar (ရေဒါကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ တင်ပြရန်)
(d) Marine Transceiver
(e) Fish Finder
(f) Radio Telephone
(g) Radio Direction Finder
(h) Auto Pilot
( i )Marine Receiver
(j) Colour Navigator
(k) Emergency Position Indicting Radio Beacon
(l) Search & Rescue Radar Transponder
(m) Sonar etc………
၇။ လေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ 7.Aeronautical Communication Equipments
(a) Radio Beacon Station
(b) Transceivers/ Receiver
(c) Distance Measuring Equipment
(d) Public Address
(e) Direction Finder
(f) Radar(ရေဒါကြီးကြပ်မှု ကော်မတီသို့တင်ပြရန်)
(h) Voice Recorder
(i) UHF Microwave Link
(j) ConsoleSwitching Equipment & Solar Power Unit
(k) Micro Wave Link etc………………..
၈။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစခန်း 8. Inmarsat Communication Equipment
၉။ ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစခန်းများ 9. B.T.S(Base Tranceiver Stations
၁၀။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ဆက်ကြောင်းများနှင့် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ 10. Microwave Link/ Digital MicrowaveRadioEquipmnet
၁၁။ အိတ်ချိန်း 11. Exchanges
၁၂။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ(ကြိုးရှိ/ ကြိုးမဲ့) 12. Internet Communication Equipments (Wire and Wireless)\_
၁၃။ VSAT နှင့် အပိုပစ္စည်းများ(ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစနစ်) 13. Very Small Aparture Terminal and Accessories
၁၄။ လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာစက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးသုံးမီတာများ 14. Spectrum Analyzer and Communication Test Meters
အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး
Reconditioned မော်တော်ယာဉ် သတ်မှတ်ချက်များ
(က) Engine, tested and adjusted to complete condition including replacement of necessary parts.
( ခ ) Under chassis including brakes, overhauled and repaired to complete safety condition including replacement of necessary parts.
( ဂ ) Body repaired to complete condition and be painted.
(ဃ) Room inside, cleaned.
( င ) New battery and tyres .
( စ ) Inspection by government authorized inspection agency.